SAWIRRO: Ufayn oo si aan la arag usoo dhaweysay Murashax Dr. Cali Xaaji Warsame | Allshacabka
SAWIRRO: Ufayn oo si aan la arag usoo dhaweysay Murashax Dr. Cali Xaaji Warsame
UFAYN, 06 DECEMBER (ALLSHACABKA)
Murashax Madaxweyne Dr Cali Xaaji Warsame ayaa siweyn maantay loogu doodhaweeyey degmada Ufayn ee gobolka Bari.
Soodhaweynta Murashax Dr. Cali Xaaji Warsame ayaa waxaa ka qayb qaatay Isimo, Culimo, Odayaal, Siyaasiyiin, Saraakiil, Haween, Dhallinyaro iyo arday iyagoo si aan horey loo arag murashaxa ugu soodhaweeyey degmada taariikhiga ah ee Ufayn.
Dr. Cali Xaaji Warsame oo socdaalkiisa deegaanada Puntland uu ku marayo ku dhex jira ayaa mid mid u salaamay dadkii soo dhaweeyay oo ruxayey calamo iyo caleemo qoyan oo ayaan u ah ololaha murashaxa, isagoo uga mahadceliyay sida balaaran ee ay u soo dhaweeyeen deegaankiisa.
Boqolaalka ruux ee soo dhaweeyay Musharaxa ayaa safnaa wadoonyinka iyagoo ku dhawaaqayay erayo ay ka mid ahaayeen, “Guulayso Cali Xaaji Warsame Madaxweynoow”.
Deegaanka Ufeyn ayaa magaalada ganacsiga Puntland ee Bosaaso uga beeggan 1,10 KM, waana deegaan facwayn oo la aasaasay 60 sano ka hor.
Bulshadda Ufeyn ayaa Murashax Dr. Cali Xaaji Warsame uga mahadceliyay socdaalka uu ku yimid deegaanka oo laamiga ka fog inta badana aan la gaarin oo loo yaqaan gaari-waa.
Murashax Dr. Cali Xaaji Warsame ayaa booqday xarumaha loogu adeego Bulshadda sida Isbitaalka, Iskuulada, ceelasha biyaha isagoo balan qaaday inuu buuxinayo baahiyaha jira, haddii la doorto.
Murashax Madaxweyne Dr. Cali ayaa maalmahaan socdaal ku maraya deegaanada Puntland, si uu ugu guur galo baahiyaha bulsho ee ka jira isagoo u ambabaxay gobolka Sanaag oo looga diyaar garoobayo soodhaweyntiisa.
SAWIRRADA MURASHAX DR. CALI XAAJI WARSAME EE UFAYS HOOS KA DAAWO:
Short URL: http://www.allshacabka.com/?p=20623